Ubukho be-monopoly yeQualcomm kunye neBroadcom, abathengisi beApple, bancitshisiwe | Ndisuka mac
Ubukho be-monopoly yeQualcomm kunye neBroadcom, abathengisi beApple bancitshisiwe
Ezona ndaba ziphambili zasemva kwemini yayizizinto ezincinci, ezichaphazelekayo kwikamva lenkampani esekwe eCupertino. QualcommUmthengisi wee-microprocessors kunye nezinye izinto ze-elektroniki zeApple, ugqibe kwelokuba asikhabe isicelo sakhe Babenazo etafileni kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, nguSomandla Broadcom.
Esi sithembiso sanikezela ngesixa se- $ 103 yezigidigidi ekuthengeni ngokupheleleyo umenzi waseMntla Melika. Ukuba ukuthengwa kwenzekile, ubunini obenziweyo ngebabubeka emngciphekweni ubudlelwane bokusebenzisana, Sele yonakele phakathi kweenkampani ezilwayo.
Zombini iinkampani, ababoneleli bezinto zeemveliso ze-Apple, bebekwiingxoxo kangangeeveki ezininzi ukuba bazuze Qualcomm yinkampani yaseNyakatho Melika. Nangona kunjalo, nangona iintetho zingekagqitywa, kubonakala ngathi esi sivumelwano asizukugqitywa.
Nangona kunjalo, ukusukela Broadcom banethemba. Ngokwengxelo evulwe ngu Reuters, ugqibile ngalo mbandela:
"Siyaqhubeka nokukholelwa ukuba isindululo sethu simele ezona zinto zinomtsalane nezityebisayo ezikhoyo kubanini zabelo beQualcomm kwaye siyakhuthazeka yindlela abasabela ngayo."
Kunoko, Qualcomm uphantse wakhutyekiswa ngumbono olula wokuba le nto inokufunyanwa inokufunyanwa:
"I-Broadcom ijongela phantsi iQualcomm kwaye le ntshukumo iza nolawulo olungaqinisekanga."
Kufuneka iqatshelwe into yokuba isenzo solu hlobo siya kuba sesona senzo sikhulu kwimbali, kwaye siya kujongana novavanyo olunzulu ngamajelo osasazo alawulayo, ngakumbi kuba iya kuvumela Broadcom Yonwabela kufutshane nolawulo lweemarike olupheleleyo, engazange ibonwe ukuza kuthi ga ngoku kwizixhobo ezahlukeneyo zeteknoloji.
Iimodyuli ze-Wi-Fi, iBluetooth, iiprosesa ngobuninzi bezixhobo eziphathwayo, uninzi lwenzwa kunye nezinye izinto, konke okubonelelwa yinkampani enye, ngaphandle kokhuphiswano, kuya kubangela ingxaki kwixabiso lempahla yeApple.
Nokuba siyintoni na isiphumo salo msitho ekugqibeleni, iApple ayinakwenzakaliswa kwezinye iimeko, kodwa izuze kwezi meko zombini:
Kwelinye icala, ukugcina bobabini ababoneleli ngokwahlukeneyo ngekhe kwandise ukhuphiswano lweemarike, ke iApple inokugcina indawo yayo kwaye iqhubeke nokufumana isabelo sentengiso.
Kwelinye icala, ngenxa yezimangalo ezivulekileyo ezigcinwa yinkampani Qualcomm, ukuba ekugqibeleni bekukho ukufunyanwa, ngokuqinisekileyo Broadcom wayezakubuya ngaphandle kuzo zonke izimangalo ezivulekileyo ukunqanda ukuphulukana nomnye wabathengi bakhe abakhulu.
Siza kubona ukuba kwenzeka njani phakathi kwezi nkampani zimbini, Kwaye ukuba uyilo lwazo zombini zinokuchaphazela njani okanye zichaphazele kakubi ikamva le-Apple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ubukho be-monopoly yeQualcomm kunye neBroadcom, abathengisi beApple bancitshisiwe
I-Apple ithengise i-AirPods ezizigidi ezingama-30 kunyaka olandelayo
I-HomePod yesizukulwana sesibini inokubandakanya i-ID yobuso